तपाई टाउको दुखेरे हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस ! | Ajako Aartha | Nepal's No. 1 Business News Portal
तपाई टाउको दुखेरे हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस !
एजेन्सी – हाम्रो व्यस्थ दैनिकी, अनेक तनाब, दिनभरको काम र थकानले हाम्रो स्वास्थ्यमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु देखा पर्दछन् । ती मध्य धेरैलाई सताउने समस्या भनेको टाउको दुखाई पनि हो । हामी मध्य धेरैलाई टाउको दुखने समस्याले बारम्बार सताइरहेको हुन्छ ।
हामी मध्य धेरैले टाउको दुखाई कम गर्न बजारमा पाइने विभिन्न किसिमका औषधीहरु प्रयोग गर्ने गछौं । तर हामीले हाम्रो भान्सामा पाइने सामग्रीको प्रयोग गरी घरेलु तरीकाले पनि यसको उपचार गर्न सक्छौं । यस्ता सामग्रीको प्रयोग गरि हामीले सजिलै टाउको दुखाईबाट मुक्ति पाउन सक्छौं । ती उपायहरु निम्न छन्
– टाउको दुखाइका लागि ल्वाङ र नुनको मिश्रण एकदमै फाइदाजनक हुने गर्छ । तपाइले ल्वाङको धुलो र नुनलाई दुधमा हालेर पिउने गर्नु भयो भने यसले केहि छिनमा नै तपाईको टाउको दुखाइ कम गर्छ ।
– कागती र तातो पानीको सेवनले पनि टाउको दुखाई कम गर्न सकिन्छ । किनभने धेरैपटक पेटमा ग्याँस बनेका कारण पनि टाउको दुख्ने गर्दछ र कागती पानीले ग्याँसको समस्या हल गर्नुका साथै टाउकोको दुखाई पनि कम गर्दछ ।
– तपाईको चिया खाने बानी छ भने चियामा कागतीको दुई चार थोपा राखेर खान सक्नु हुन्छ जस्ले गर्दा तपाईको टाउको दुखाई कम हुन्छ ।
– टाउको दुखाईमा अदुवा र तुलसीको प्रयोग एकदमै लाभदायक मानिन्छ । तपाईलाई टाउको दुखिरहेको छ भने तुलसीको पात र अदुवा पिनेर त्यसको लेप टाउकोमा लगाउन सक्नु हुन्छ । जसले गर्दा तपाईको टाउकोलाई दुखाईबाट राहत मिल्छ ।
(तपाईको घरमा ल्वाङको तेल छ भने ल्वाङको तेल लगाएर केहि समय टाउको मालिस गर्न सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा तपाईको टाउकोर्ले मसाज पाउछ र दुखाई पनि कम हुन्छ ।
बोल्ड तस्विरमा हेर्नुहोस् सुरविना
मनोरञ्जन कात्तिक २६, २०७६
तपाईलाई सधैँ रिस उठ्छ ? यसरी गर्नुस् रिसको नियन्त्रण
स्वास्थ्य कात्तिक २६, २०७६
जाडो बढ्यो, चिसोको संक्रमणबाट बच्न के–के गर्ने ?
घर बनाउन सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिदैँ नेपाल बैंक
बैंक-वित्त कात्तिक २६, २०७६
नेपालमा खाना पकाउन ग्याँसभन्दा विजुली सस्तो
मुख्य समाचार कात्तिक २६, २०७६
१० हजारमा बेचेकी बालिकालाई युवती बनाउन सुई र औषधि
समाचार कात्तिक २७, २०७६
घुस मागेको आरोपमा एक कर्मचारी पक्राउ
पहिलेको भन्दा ४४ प्रतिशत सस्तो वायुसेवाको जहाज
मुख्य समाचार कात्तिक २७, २०७६
सिकार गर्ने गएका एकको गोली लागेर मृत्यु
भरपर्दो सुरक्षा आवश्यक मन्त्री थापा
राजनीति कात्तिक २७, २०७६
European Euro १२५.७१ १२६.३७
UK Pound Sterling १४६.३३ १४७.१०
Swiss Franc ११४.६० ११५.२०
Australian Dollar ७७.९८ ७८.३९
Canadian Dollar ८६.०६ ८६.५१
स्वास्थ्य फागुन १२, २०१९
न औषधी, न अप्रेशन, यसरी पनि हुन्छ रोगको निदान
स्वास्थ्य फागुन ११, २०१९
जाडोमा मोटरसाईकल यसरी चलाउनुहोस्, नत्र छाती संक्रमण हुन सक्छ
समाचार फागुन १३, २०१९